China Chinese fekitori Wholesale Super 2.0 Chiteshi Imba Theatre BT5.0 3D Hifi Bass Inzwi TV Soundbar (SP-614) Kugadzira uye Fekitori | Eyin
Chinese fekitori wholesale Super 2.0 Chiteshi Imba Theatre BT5.0 3D Hifi Bass Inzwi TV Soundbar (SP-614)
Magetsi: DC, 18V / 2A
Mutyairi Chikamu: 2.25 ″ x4
Simba Rinobuda: 40W
Kakawanda Kupindura: 60Hz-20KHz
Kukura Kwechigadzirwa: W860 × D70 × H70MM
Basa: Bluetooth / ARC / Optical / AUX / RCA / USB
SOUNDBAR NE SUBWOOFER:
Magetsi: AC110V ~ 240V 50 / 60Hz, DC18V, 4A
Mutyairi Unit: 2.25 ″ x4 + 5.5, Output Power: 80W
Kakawanda Kuteerera: 30Hz-20KHz
Saizi Yeravha Saizi: W860x70x70MM
Kukura kweSowowoofer: W265x210x230MM
Kubvisa: ARC / Bluetooth / Optical / USB / AUX
• ELEGANT & IMMERSIVE HOME THEATER EXPERIENCE - Iine yakakwidziridzwa 34 mainji pakureba, iri pasi pe2,5 inches pakakwirira, matte nhema yakapera dhizaini, iyo terevhizheni bar inounza yako yakanakisa imba cinema ruzivo. Maviri matanhatu-inch epakati-renji mutyairi, 1-inch tweeters, uye yakasarudzika Power Bass tekinoroji inobatsira kune yakadzika yakadzika mafrifits uye 110dB yezwi rakajeka. Iyo zvakare yakagadzirirwa kune maviri mativi symmetrical bass reflex chiteshi, iine yakadzika mabass uye yakawanda simba. Inzwa ruzha, inzwa mutsauko!
• BLUETOOTH 5.0 & DSP YAKAKWANISA KUSIMBISA KUDZIDZISWA - Yedu yazvino kurira bhawa inotora Bluetooth 5.0 & DSP tekinoroji yekuona yekumhanyisa yekumhanyisa kumhanyisa kumhanya, uye kugadzikana kubatika kusvika ku50 ft ine yakaderera kushandiswa. Nechinhu chitsva cheBluetooth 5.0, unogona kutamba mimhanzi yako yaunofarira chero kupi. Kuti iite kuti ive nyore, isu takawedzera bhatani reBluetooth pane iro bhaa bhawa iro rinokutendera kuti ubatanidze mudziyo wako nyore.
• OPTIMIZE ENTERTAINMENT NEMAZWI AKASIYANA WEMAZWI - Mumhanzi, Bhaisikopo, akajairwa modhi achigadzirisa nekushandisa inosanganisirwa kure. MuMovie mode, shandura firimu yakajairwa mune yakasarudzika imba yemitambo chiitiko. Wedzera kumwe kujekesa uye mimhanzi kune yako yekutamba muMusic mode. Munzira Dzakajairika, Eyin mainjiniya kusimbisa kurira kwezwi remunhu kuti ugare uchitevera nyaya. Iyo yekuwedzera vhoriyamu uye simba zviri nyore kuwanikwa parutivi rweinzwi bhaa.
• ZVINOKOSHA ZVINOGONESESA ZVINOGONESESA UYE ZVINOGONESESA UP - Yedu 2.0 TV inzwi bhawa inotsigira yakawanda wired sarudzo inosanganisira HDMI ARC, Optical, AUX yekuisa, uye USB inoenderana neTV, projekita, komputa, Blu-ray mutambi, piritsi, XBOX, PS4, Amplifier, uye zvimwe. Ingo ita shuwa kuti yako yeTV odhiyo yekumisikidza kuPMM yeiyo optical mode usati washandisa. Ikozvino, premium 5 ft Optical tambo uye 5 ft RCA tambo inosanganisirwa mupakeji.
• RUDZIMA RUKWIRA & RAKO RUVIMBISO RUNOGONESESWA ZVAKANAKA - Iyo yakasarudzika-yakatetepa dhizaini bhaisikopo inokwana zvakanaka pasi pechero saizi TV kana inogona kuiswa nyore pamadziro nebracket inosungirirwa inosanganisirwa. KURARAMA ZVAKAITIKA garandi. Yese Eyin ruzha bhaa ichaenda kuburikidza neyakaomarara mhando bvunzo maitiro usati watumira kunze.
Pashure: 2021 Nyowani Ruzha Bhari ine Yakavakirwa-In Subwoofers, Bluetooth, uye Alexa Voice Kudzora Yakavakirwa-Mukati (SP-620E (S100))
2020 Kupisa kutengesa TV soundbar ine Wireless Subw ...
China 3d 2.1 2.0 Wall Yakarembera Kumba Theatre Syst ...
2.1 Kumba Theatre Makaralı 3D redhiyo Soundbar ...
China vatengesi yemapuranga gudzanzwi mutauri kumba TH ...
Tv And Soundbar Gomo, Wifi Soundbar YeTv, Karaoke Soundbar, Wifi Soundbar Vatauri, Alexa Soundbar, Sravana Sameeralu Serial 4th Tv Soundbars,